Shwe Khit - Page4of 471 - Media and Entertainment
မိနျးမ ၃၉ ယောကျယူထားတဲ့ အိန်ဒိယက Ziona Chana ဆိုတဲ့ အမြိုးသားဟာ အသကျ ၇၆ နှဈအရှယျမှာ ကှယျလှနျသှားပွီလို့ ရိုကျတာသတငျးဌာနမှာ ရေးသားထားပါတယျ။
သူ့မှာ မိနျးမ ၃၉ ယောကျ ကလေး ၉၄ ယောကျနဲ့ မွေး ၃၃ ယောကျစုစုပေါငျးမိသားစု ၁၆၇ ယောကျရှိပွီး အိမျကွီးတဈအိမျတညျးမှာပဲ နထေိုငျကွတာဖွဈပါတယျ။
သူဟာ အိန်ဒိယနိုငျငံ မီဇိုရမျပွညျနယျက ဝေးလံခေါငျသီတဲ့ ရှာလေးတဈရှာမှာ နထေိုငျတာဖွဈပွီး သူ့ရဲ့သတငျးတှကွေောငျ့ သူတိုရှာဟာ ကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသှားတှေ လာရောကျလညျပတျရတဲ့ နရောတဈခု ဖွဈလာပါတယျ။
မိန်းမ ၃၉ ယောက်ယူထားတဲ့ အိန္ဒိယက Ziona Chana ဆိုတဲ့ အမျိုးသားဟာ အသက် ၇၆ နှစ်အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီလို့ ရိုက်တာသတင်းဌာနမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
သူ့မှာ မိန်းမ ၃၉ ယောက် ကလေး ၉၄ ယောက်နဲ့ မြေး ၃၃ ယောက်စုစုပေါင်းမိသားစု ၁၆၇ ယောက်ရှိပြီး အိမ်ကြီးတစ်အိမ်တည်းမှာပဲ နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်က ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာမှာ နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့သတင်းတွေကြောင့် သူတိုရွာဟာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ လာရောက်လည်ပတ်ရတဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။
၅…၅….၅၀၀ ကပျြပဲ ပေးပါ….. ၅၀၀ ရရငျ အမဆေီ့ ထမငျးဝယျပွီ ပွနျမယျ 😔😔😔
မီးပှိုငျ့ စိမျးခါနီး….Back မှနျလေးထဲကနေ ရုတျတရကျ တှမွေ့ငျလိုကျ….
ကားလေး ဘေးခရြပျပွီ……လမျးလေး လြှောကျကာ
အဘရေ…တကုံး ဘယျလောကျတုနျး? ?
၅…၅…၅၀၀ ပဲ ပေးပါကှာ (အဘက စကားထဈ မသနျစှမျး တယောကျပါ)
တကုံးပဲ ရှိတော့တာလား….အဘ? ?
( အဘက မသနျစှမျးတော့ သိပျမဝယျကွဘူး ထငျတယျ…. ပနျးက နှမျးနပေါပွီ….မီးစိမျးပွီဆို ကားတှကေ မစောငျ့ခငျြ…အဘက ဖွေးဖွေးခငျြး မနညျး လမျးဘေးပွနျလြှောကျနရေတယျ…..) Back မှနျထဲက တှရေ့တာပါ 😔🙏
အော…. ဟုတျ ကနြျော ယူမယျ နျော….
ဟုတျ…ဟုတျ အဘ….ကနြျော ပေးမယျနျော
အမကေ အသကျ ဘယျလောကျရှိပွီလဲ…အဘကကော? ?
အမကေ…အသကျ (80)ကြျော……အဘက (52)နှဈရှိပွီတဲ့ 😔
ဟုတျ…အဘ…. ရော့ ပနျးဖိုး 20000 Ks 🙏
အဘ…မှာ ပွနျအမျးဖို့ မရှိဘူး (အိတျလေးထဲ လကျလေးနှိုကျပွီ ရှာနရှောတယျ)
မအမျးနဲ့ အဘ…. မိုးရှာတော့မယျ အိမျပွနျတော့နျော အဖှားတှကျ ထမငျးဟငျး ဝယျသှားလိုကျနျော…😇
အဖှားအတှကျ 10000 Ks,. …. အဘအတှကျ 10000 Ks….. ယူလိုကျနျော
မပီသတဲ့ လုံးထှေးနသေော ဆုတောငျးသံလေးမြားနှငျ့ အဘ အိမျပွနျသှားတယျ 🙏🙏🙏
အဘ ပနျးလေး….ကားလေးထဲ ခြိတျထားလိုကျပါတယျ…😍
၅…၅….၅၀၀ ကျပ်ပဲ ပေးပါ….. ၅၀၀ ရရင် အမေ့ဆီ ထမင်းဝယ်ပြီ ပြန်မယ် 😔😔😔
မီးပွိုင့် စိမ်းခါနီး….Back မှန်လေးထဲကနေ ရုတ်တရက် တွေ့မြင်လိုက်….
ကားလေး ဘေးချရပ်ပြီ……လမ်းလေး လျှောက်ကာ
အဘရေ…တကုံး ဘယ်လောက်တုန်း? ?
၅…၅…၅၀၀ ပဲ ပေးပါကွာ (အဘက စကားထစ် မသန်စွမ်း တယောက်ပါ)
တကုံးပဲ ရှိတော့တာလား….အဘ? ?
( အဘက မသန်စွမ်းတော့ သိပ်မဝယ်ကြဘူး ထင်တယ်…. ပန်းက နွမ်းနေပါပြီ….မီးစိမ်းပြီဆို ကားတွေက မစောင့်ချင်…အဘက ဖြေးဖြေးချင်း မနည်း လမ်းဘေးပြန်လျှောက်နေရတယ်…..) Back မှန်ထဲက တွေ့ရတာပါ 😔🙏
အော…. ဟုတ် ကျနော် ယူမယ် နော်….
ဟုတ်…ဟုတ် အဘ….ကျနော် ပေးမယ်နော်
အမေက အသက် ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ…အဘကကော? ?
အမေက…အသက် (80)ကျော်……အဘက (52)နှစ်ရှိပြီတဲ့ 😔
ဟုတ်…အဘ…. ရော့ ပန်းဖိုး 20000 Ks 🙏
အဘ…မှာ ပြန်အမ်းဖို့ မရှိဘူး (အိတ်လေးထဲ လက်လေးနှိုက်ပြီ ရှာနေရှာတယ်)
မအမ်းနဲ့ အဘ…. မိုးရွာတော့မယ် အိမ်ပြန်တော့နော် အဖွားတွက် ထမင်းဟင်း ဝယ်သွားလိုက်နော်…😇
အဖွားအတွက် 10000 Ks,. …. အဘအတွက် 10000 Ks….. ယူလိုက်နော်
မပီသတဲ့ လုံးထွေးနေသော ဆုတောင်းသံလေးများနှင့် အဘ အိမ်ပြန်သွားတယ် 🙏🙏🙏
အဘ ပန်းလေး….ကားလေးထဲ ချိတ်ထားလိုက်ပါတယ်…😍
တဘောငျ ပျေါသညျ့အတိုငျးလညျး ထှကျပျေါခဲ့ကွသညျ့ မငျးမြားမှာ ၁။ပုဂံခတျေ( စီးခငျြးထိုးလကျြ မြိုးမငျးထှကျ ပွညျတျောသာလိမျ့မယျ။)ထို”တဘောငျ” ပျေါပွီးနောကျ “အနျောရထာ” မငျးလောငျးသညျ ဦးရီးတျော စုက်ကတေးမငျးနှငျ့ စီးခငျြးထိုးခဲ့သညျ။စုက်ကတေးမငျးအား အနိူငျတိုကျခိုကျပွီးနောကျအနျောရထာသညျ ပုဂံပွညျ့ရှငျ ဖွဈလာခဲ့သညျ။ထိုမငျးလကျထကျတှငျ သာသနာရောငျဝါထှနျးလငျးပွီးဆနျရစေပါးပေါမြား ကာ ခမျြးသာကွှယျဝခဲ့သညျ။၂။အငျးဝခတျေ( အငျးအိုငျထဲက လူတဈယောကျမီးတောကျကလေးကိုငျလို့ပေါကျ)ထို” တဘောငျ” ပျေါပွီးနောကျ “သတိုးမငျးဖြား “သညျရှငျဘုရငျဖွဈလာကာ နနျးတျောကို အငျးဝမွို့၌ တညျခဲ့သညျ။
ထိုမငျးသညျ လညျး နယျပယျအမြားအပွားကို သိမျးပိုကျကာဘုနျးမီးနလေတောကျပခဲ့သညျ။၃။တောငျငူခတျေ(အိုဘယျ့အမောငျ ဆံရှဆေောငျ နောကျလိုကျဘုနျးခေါငျပွောငျလိမျ့မယျ။)ထို “တဘောငျ” ပျေါပွီး ကွာသျော တောငျငူမွို့တှငျမငျးကွီးညို မှ သားတျောတပါးမှေးဖှား လာလသေညျ။ထိုသားတျော၏ ဦးခေါငျးတှငျ ရှရေောငျဆံပငျ တဈမှေးပါလာလသေညျ။နောငျသျော ထိုမငျးသားသညျ “တပငျရှထေီး “ဟု၍ တောငျငူဘုရငျဖွဈလာလသေညျ။သို့သျောလညျးသကျတျောမရှညျပဲ သူ၏ ယောကျဖတျော ဘုရငျ့နောငျကထီးနနျးကို ဆကျခံလသေညျ။ဘုရငျ့နောငျလကျထကျရောကျသျောမွနျမာပွညျကွီးဘုနျးမီးနလေတောကျပလသေညျ။၄။ကုနျးဘောငျခတျေ(ဖိုသုံးဖို တဈဖိုတောကျမညျ)
ထို “တဘောငျ ” ပျေါပွီး နောကျ မုဆိုးဖို ရှာသူကွီးဦးအောငျဇယြေ သညျ ပကျြပွားနသေော မွနျမာပွညျကွီးအား လကျရုံးရညျ နှလုံးရညျဖွငျ့ ပွနျလညျစုစညျးပွီးနောကျ အလောငျးမငျးတရား ဘှဲ့ဖွငျ့ ဘိသိတျခံ နနျးတကျလသေညျ။၅။ယခုခတျေ(ပျေါမလာသေး၍ စောငျ့ကွညျ့ရမညျ) (၂၆၀၀ သာသနာ “ဗုဒ်ဓရာဇာ”ပျေါလာမှာစညျတျောကွီးလညျး ဟီးလိမျ့မယျ။) ထို “တဘောငျ”သညျ ဗုဒ်ဓ သာသနာအား ကမ်ဘာတဈခှငျဖွနျ့ကကျြထှနျးလငျးစပွေီး မွနျမာပွညျအားလညျးသာသနာတျောကို နတေဈဆူ လတဈဆူလို ထငျရှားစမေညျ့သာသနာပွုမငျးပျေါ မညျဖွဈသညျ။ထိုမငျးလကျထကျတှငျတိုငျးပွညျသညျ တိုးတကျခမျြးသာကွှယျဝ လှနျးအားကွီးမညျ။စညျပငျ သာယာလှပသော တိုငျးပွညျဖွဈမညျ။Credit
တဘောင် ပေါ်သည့်အတိုင်းလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့ကြသည့် မင်းများမှာ ၁။ပုဂံခေတ်( စီးချင်းထိုးလျက် မျိုးမင်းထွက် ပြည်တော်သာလိမ့်မယ်။)ထို”တဘောင်” ပေါ်ပြီးနောက် “အနော်ရထာ” မင်းလောင်းသည် ဦးရီးတော် စုက္ကတေးမင်းနှင့် စီးချင်းထိုးခဲ့သည်။စုက္ကတေးမင်းအား အနိူင်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်အနော်ရထာသည် ပုဂံပြည့်ရှင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ထိုမင်းလက်ထက်တွင် သာသနာရောင်ဝါထွန်းလင်းပြီးဆန်ရေစပါးပေါများ ကာ ချမ်းသာကြွယ်ဝခဲ့သည်။၂။အင်းဝခေတ်( အင်းအိုင်ထဲက လူတစ်ယောက်မီးတောက်ကလေးကိုင်လို့ပေါက်)ထို” တဘောင်” ပေါ်ပြီးနောက် “သတိုးမင်းဖျား “သည်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာကာ နန်းတော်ကို အင်းဝမြို့၌ တည်ခဲ့သည်။
ထိုမင်းသည် လည်း နယ်ပယ်အများအပြားကို သိမ်းပိုက်ကာဘုန်းမီးနေလတောက်ပခဲ့သည်။၃။တောင်ငူခေတ်(အိုဘယ့်အမောင် ဆံရွေဆောင် နောက်လိုက်ဘုန်းခေါင်ပြောင်လိမ့်မယ်။)ထို “တဘောင်” ပေါ်ပြီး ကြာသော် တောင်ငူမြို့တွင်မင်းကြီးညို မှ သားတော်တပါးမွေးဖွား လာလေသည်။ထိုသားတော်၏ ဦးခေါင်းတွင် ရွေရောင်ဆံပင် တစ်မွေးပါလာလေသည်။နောင်သော် ထိုမင်းသားသည် “တပင်ရွေထီး “ဟု၍ တောင်ငူဘုရင်ဖြစ်လာလေသည်။သို့သော်လည်းသက်တော်မရှည်ပဲ သူ၏ ယောက်ဖတော် ဘုရင့်နောင်ကထီးနန်းကို ဆက်ခံလေသည်။ဘုရင့်နောင်လက်ထက်ရောက်သော်မြန်မာပြည်ကြီးဘုန်းမီးနေလတောက်ပလေသည်။၄။ကုန်းဘောင်ခေတ်(ဖိုသုံးဖို တစ်ဖိုတောက်မည်)
ထို “တဘောင် ” ပေါ်ပြီး နောက် မုဆိုးဖို ရွာသူကြီးဦးအောင်ဇေယျ သည် ပျက်ပြားနေသော မြန်မာပြည်ကြီးအား လက်ရုံးရည် နှလုံးရည်ဖြင့် ပြန်လည်စုစည်းပြီးနောက် အလောင်းမင်းတရား ဘွဲ့ဖြင့် ဘိသိတ်ခံ နန်းတက်လေသည်။၅။ယခုခေတ်(ပေါ်မလာသေး၍ စောင့်ကြည့်ရမည်) (၂၆၀၀ သာသနာ “ဗုဒ္ဓရာဇာ”ပေါ်လာမှာစည်တော်ကြီးလည်း ဟီးလိမ့်မယ်။) ထို “တဘောင်”သည် ဗုဒ္ဓ သာသနာအား ကမ္ဘာတစ်ခွင်ဖြန့်ကျက်ထွန်းလင်းစေပြီး မြန်မာပြည်အားလည်းသာသနာတော်ကို နေတစ်ဆူ လတစ်ဆူလို ထင်ရှားစေမည့်သာသနာပြုမင်းပေါ် မည်ဖြစ်သည်။ထိုမင်းလက်ထက်တွင်တိုင်းပြည်သည် တိုးတက်ချမ်းသာကြွယ်ဝ လွန်းအားကြီးမည်။စည်ပင် သာယာလှပသော တိုင်းပြည်ဖြစ်မည်။Creditး
စပျစုခငျြစိတျကွောငျ့ သံတိုငျကွား (၅) နာရီကွာ ဒုက်ခခံလိုကျရတဲ့ အမြိုးသမီး
ကိုလံဘီယာနိုငျငံနေ အမြိုးသမီးကွီးတဈဦးဟာ အိမျနီးခငျြးတဈဦးရဲ့ အိမျနားသှားပွီး ခြောငျးမွောငျးနားထောငျဖို့ လုပျခဲ့ရာမှ ဒုက်ခရောကျခဲ့တဲ့အပွငျ အရှကျပါကှဲခဲ့ရကွောငျး elitereaders သတငျးအရ သိရပါတယျ။ အဆိုပါ အမြိုးသမီးကွီးဟာ ၎င်းငျးအိမျနီးခငျြးရဲ့ အိမျတံခါးသံတိုငျထဲ ခေါငျးလြိုသှငျးကာ သူမြားအိမျအရေးကို စပျစုခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ပွီးတဲ့အခါမှာတော့ သူမက သံတိုငျကွားထဲက ခေါငျးကို ပွနျမထုတျနိုငျတော့ပဲ သံတိုငျတှကွေား (၅) နာရီကွာ ခေါငျးညှပျနခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ခေါငျးညှပျခဲ့သူ အမြိုးသမီးကွီးဟာ ရပျကှကျထဲမှာ အငျမတနျစပျစုတတျသူ တဈဦးလို့လညျး သိရပါတယျ။ အခုတဈခါမှာလညျး သူငယျခငျြးတှနေဲ့တှတေဲ့အခါ အတငျးပွောဖို့ ကုနျကွမျးရှာရငျးကနေ အခုလို သံတိုငျကွား ခေါငျးညှပျတဲ့အထိ ဖွဈခဲ့ရတာပါ။ သူမြားအကွောငျးကတော့ ရပျကှကျထဲမှာ တကယျပဲ ဟိုးလေးတကြျောကြျော ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ သူမဘာသာ သူမ ခေါငျးထုတျလို့မရတဲ့အဆုံး နောကျဆုံးမှာတော့ မီးသတျဝနျထမျးတှကေို ချေါခဲ့ရပါတော့တယျ။
မီးသတျဝနျထမျးတှရေောကျလာတော့လညျး ခကျြခွငျးကွီး ဝုနျးဒိုငျးဆိုသလို ခေါငျးကို ကယျထုတျနိုငျခဲ့တာ မဟုတျပါဘူး။ အခြိနျ(၅) နာရီကွာပွီးနောကျမှ သူမရဲ့ ခေါငျးဟာ သံတိုငျတှကွေားက လှတျမွောကျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ မီးသတျဝနျထမျးတှအေနနေဲ့ ၎င်းငျးအမြိုးသမီးကွီးကို ကယျထုတျဖို့ ဘာကွောငျ့ ဒီလောကျတောငျ အခြိနျတှကွေနျ့ကွာနရေသလဲဆိုတာတော့ မသိရပါဘူး။ အခြို့ကလညျး မီးသတျဝနျထမျးတှကေ အမြိုးသမီးကွီးရဲ့ ရယျစရာကောငျးတဲ့ အဖွဈကို တှမွေ့ငျရတာကွောငျ့ သူတို့ကိုယျသူတို့ မရယျမိအောငျ ထိနျးရငျးကနေ အခုလို အခြိနျကွာသှားတာ ဖွဈလိမျ့မယျလို့လညျး တှေးနကွေပါတယျ။
အခုဆိုရငျတော့ သူတဈပါးအရေးသိပျစိတျဝငျစားလှနျးလို့ သံတိုငျကွားခေါငျးညှပျတဲ့အထိ ဖွဈရတဲ့ အမြိုးသမီးကွီးရဲ့ ဓာတျပုံတှဟော အှနျလိုငျးပျေါမှာတော့ တျောတျောလေး ပွနျ့နှံ့နပွေီ ဖွဈပါတယျ။ လူတှကေတော့ ဒါဟာ ကိုယျပွုတဲ့ အကြိုးဆကျကို ကိုယျပွနျခံစားရတာလို့ ဆိုနကွေသလို သူမြားအတငျးပွောရာတာ နှဈသကျသူတှအေတှကျတော့ အခုဖွဈရပျလေးဟာ သငျခနျးစာယူစရာ ဖွဈနကွေောငျးလညျး ပွောနကွေပါတယျ။
စပ်စုချင်စိတ်ကြောင့် သံတိုင်ကြား (၅) နာရီကြာ ဒုက္ခခံလိုက်ရတဲ့ အမျိုးသမီး
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံနေ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးဟာ အိမ်နီးချင်းတစ်ဦးရဲ့ အိမ်နားသွားပြီး ချောင်းမြောင်းနားထောင်ဖို့ လုပ်ခဲ့ရာမှ ဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့အပြင် အရှက်ပါကွဲခဲ့ရကြောင်း elitereaders သတင်းအရ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ အမျိုးသမီးကြီးဟာ ၎င်းအိမ်နီးချင်းရဲ့ အိမ်တံခါးသံတိုင်ထဲ ခေါင်းလျိုသွင်းကာ သူများအိမ်အရေးကို စပ်စုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ သူမက သံတိုင်ကြားထဲက ခေါင်းကို ပြန်မထုတ်နိုင်တော့ပဲ သံတိုင်တွေကြား (၅) နာရီကြာ ခေါင်းညှပ်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းညှပ်ခဲ့သူ အမျိုးသမီးကြီးဟာ ရပ်ကွက်ထဲမှာ အင်မတန်စပ်စုတတ်သူ တစ်ဦးလို့လည်း သိရပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာလည်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါ အတင်းပြောဖို့ ကုန်ကြမ်းရှာရင်းကနေ အခုလို သံတိုင်ကြား ခေါင်းညှပ်တဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ သူများအကြောင်းကတော့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ တကယ်ပဲ ဟိုးလေးတကျော်ကျော် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမဘာသာ
သူမ ခေါင်းထုတ်လို့မရတဲ့အဆုံး နောက်ဆုံးမှာတော့ မီးသတ်ဝန်ထမ်းတွေကို ခေါ်ခဲ့ရပါတော့တယ်။
မီးသတ်ဝန်ထမ်းတွေရောက်လာတော့လည်း ချက်ခြင်းကြီး ဝုန်းဒိုင်းဆိုသလို ခေါင်းကို ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်(၅) နာရီကြာပြီးနောက်မှ သူမရဲ့ ခေါင်းဟာ သံတိုင်တွေကြားက လွတ်မြောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မီးသတ်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ ၎င်းအမျိုးသမီးကြီးကို ကယ်ထုတ်ဖို့ ဘာကြောင့် ဒီလောက်တောင် အချိန်တွေကြန့်ကြာနေရသလဲဆိုတာတော့ မသိရပါဘူး။ အချို့ကလည်း မီးသတ်ဝန်ထမ်းတွေက အမျိုးသမီးကြီးရဲ့ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်ကို တွေ့မြင်ရတာကြောင့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ မရယ်မိအောင် ထိန်းရင်းကနေ အခုလို အချိန်ကြာသွားတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်း တွေးနေကြပါတယ်။
အခုဆိုရင်တော့ သူတစ်ပါးအရေးသိပ်စိတ်ဝင်စားလွန်းလို့ သံတိုင်ကြားခေါင်းညှပ်တဲ့အထိ ဖြစ်ရတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဟာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာတော့ တော်တော်လေး ပြန့်နှံ့နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေကတော့ ဒါဟာ ကိုယ်ပြုတဲ့ အကျိုးဆက်ကို ကိုယ်ပြန်ခံစားရတာလို့ ဆိုနေကြသလို သူများအတင်းပြောရာတာ နှစ်သက်သူတွေအတွက်တော့ အခုဖြစ်ရပ်လေးဟာ သင်ခန်းစာယူစရာ ဖြစ်နေကြောင်းလည်း ပြောနေကြပါတယ်။
ဒုစရိုကျမှုနှငျ့ ခမျြးသာခွငျး” – ဒုစရိုကျမှုလုပျပွီး ရတာတှနေဲ့ ဘုရားတညျ ကြောငျးဆောကျတယျဆိုတာ
ဒုစရိုကျမှုနှငျ့ ခမျြးသာခွငျး”ဒုစရိုကျမှုလုပျပွီး ရတာတှနေဲ့ ဘုရားတညျ ကြောငျးဆောကျတယျ။ အဲဒါကို အကုသိုလျ+ကုသိုလျ ရောနှောနတေဲ့ မိဿကကံလို့ ချေါတယျ။မိဿကကံကို ပွုထားသူက နောကျဘဝမှာ လူပွနျဖွဈခဲ့ရငျ- ကောငျးရောငျး ကောငျးဝယျ လုပျကိုငျ စားသောကျရငျ စီးပှားမဖွဈတော့ဘူး။ ဒုစရိုကျလုပျငနျးကို လုပျကိုငျမှသာလြှငျ စီးပှားဖွဈတော့တယျ။
အဲဒီအခါမှာ ကောငျးတာလဲလုပျရငျ ကောငျးတာဖွဈတယျ။ မကောငျးတာလုပျရငျ မကောငျးတာဖွဈတယျဆိုတာ မဟုတျဘူး။ မကောငျးတာလုပျလို့ မကောငျးတာဖွဈရငျ ငါစီးပှားတကျစရာအကွောငျးမရှိဘူးဆိုပွီး မိစ်ဆာဒိဋ်ဌိဖွဈသှားတယျ။မိစ်ဆာဒိဋ်ဌဖွဈသှားတဲ့အခါမှာ ခမျြးသာဖို့ စီးပှားတကျဖို့ဆိုရငျ မပွုဝံ့တဲ့ဒုစရိုကျမှုဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ သလှေနျတဲ့အခါ ငရဲကနေ လှတျဖို့ ခကျသှားပါပွီ။
ဒုစရိုကျပွုပွီး ခမျြးသာတယျ စီးပှားဖွဈတယျဆိုတာ ကွာမြိုးငါးပါးနဲ့ ပွညျ့စုံသာယာနတေဲ့ ရကေနျကွီးထဲမှာ နဈပွီး သရေတာနဲ့ အတူတူပဲ။သုစရိုကျမှုတှနေဲ့ ခမျြးသာတာ စီးပှားဖွဈတာကတော့ ပြားရညျကနျကွီးထဲမှာ ပြားရညျသောကျရငျး ကူးခတျပွီး တဈဖကျကမျးကို ရောကျသှားသူနဲ့ တူပါတယျ။ (မိုးသု)
ဒုစရိုက်မှုနှင့် ချမ်းသာခြင်း”ဒုစရိုက်မှုလုပ်ပြီး ရတာတွေနဲ့ ဘုရားတည် ကျောင်းဆောက်တယ်။ အဲဒါကို အကုသိုလ်+ကုသိုလ် ရောနှောနေတဲ့ မိဿကကံလို့ ခေါ်တယ်။မိဿကကံကို ပြုထားသူက နောက်ဘဝမှာ လူပြန်ဖြစ်ခဲ့ရင်- ကောင်းရောင်း ကောင်းဝယ် လုပ်ကိုင် စားသောက်ရင် စီးပွားမဖြစ်တော့ဘူး။ ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်မှသာလျှင် စီးပွားဖြစ်တော့တယ်။
အဲဒီအခါမှာ ကောင်းတာလဲလုပ်ရင် ကောင်းတာဖြစ်တယ်။ မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာ မဟုတ်ဘူး။ မကောင်းတာလုပ်လို့ မကောင်းတာဖြစ်ရင် ငါစီးပွားတက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြီး မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ ချမ်းသာဖို့ စီးပွားတက်ဖို့ဆိုရင် မပြုဝံ့တဲ့ဒုစရိုက်မှုဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ သေလွန်တဲ့အခါ ငရဲကနေ လွတ်ဖို့ ခက်သွားပါပြီ။
ဒုစရိုက်ပြုပြီး ချမ်းသာတယ် စီးပွားဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကြာမျိုးငါးပါးနဲ့ ပြည့်စုံသာယာနေတဲ့ ရေကန်ကြီးထဲမှာ နစ်ပြီး သေရတာနဲ့ အတူတူပဲ။သုစရိုက်မှုတွေနဲ့ ချမ်းသာတာ စီးပွားဖြစ်တာကတော့ ပျားရည်ကန်ကြီးထဲမှာ ပျားရည်သောက်ရင်း ကူးခတ်ပြီး တစ်ဖက်ကမ်းကို ရောက်သွားသူနဲ့ တူပါတယ်။ (မိုးသု)
သမီးဖွဈ သူ ရဲ့မင်ျဂလာ ဦးညဖွတျသနျး ပုံ ကို အမဖွေဈ သူကွားပွီး သတိ လဈ……….။
သမီးဖွဈသူ မင်ျဂလာဆောငျပှဲအပွီးးးးး အမဖွေဈသူက
“သမီး မင်ျဂလာဦးည ဘယျလိုဖွဈလဲ အမကေို့ ပွောပွ..
ပွောရမှာ ရှကျရငျ စကားဝှကျသုံးပွီး စာပို့လိုကျ”
” ဟုတျ အမေ”
နောကျရကျကြ သမီး ဆီကစာတဈစောငျ ဝငျလာတယျ
“အမေ MAI-Yangon-Bangkok ပဲ” ဒဲ့ ။
အဲ့ဒါနဲ့အမဖွေဈသူလညျး ဘာအဓိပ်ပါယျ ဆိုတာသိရအောငျ MAI ရုံးကို
“MAI ရနျကုနျ ကနေ ဘနျကောကျက လယောဉျ အကွီးစားတှေ ဖွဈပွီး
တဈရကျ ၅ ကွောငျး ရှိပါတယျ။
တဈပါတျမှာ ၇ ရကျလုံး နားရကျ မရှိပါဖူး။
လယေဉျတဈခါ ပွေးဆှဲခြိနျ ၄၅ မိနဈ ထိ ကွာပါတယျ။” လို့ MAI ရုံးဝနျထမျးက ပွနျဖွလေိုကျတယျ။
အဲ့ဒါ ကွားပွီး တော့ အမဖွေဈသူလညျး သတိလဈသှားတော့တယျ။
သမီးဖြစ် သူ ရဲ့မင်္ဂလာ ဦးညဖြတ်သန်း ပုံ ကို အမေဖြစ် သူကြားပြီး သတိ လစ်……….။
သမီးဖြစ်သူ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအပြီးးးးး အမေဖြစ်သူက
“သမီး မင်္ဂလာဦးည ဘယ်လိုဖြစ်လဲ အမေ့ကို ပြောပြ..
ပြောရမှာ ရှက်ရင် စကားဝှက်သုံးပြီး စာပို့လိုက်”
” ဟုတ် အမေ”
နောက်ရက်ကျ သမီး ဆီကစာတစ်စောင် ဝင်လာတယ်
“အမေ MAI-Yangon-Bangkok ပဲ” ဒဲ့ ။
အဲ့ဒါနဲ့အမေဖြစ်သူလည်း ဘာအဓိပ္ပါယ် ဆိုတာသိရအောင် MAI ရုံးကို
“MAI ရန်ကုန် ကနေ ဘန်ကောက်က လေယာဉ် အကြီးစားတွေ ဖြစ်ပြီး
တစ်ရက် ၅ ကြောင်း ရှိပါတယ်။
တစ်ပါတ်မှာ ၇ ရက်လုံး နားရက် မရှိပါဖူး။
လေယဉ်တစ်ခါ ပြေးဆွဲချိန် ၄၅ မိနစ် ထိ ကြာပါတယ်။” လို့ MAI ရုံးဝန်ထမ်းက ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
အဲ့ဒါ ကြားပြီး တော့ အမေဖြစ်သူလည်း သတိလစ်သွားတော့တယ်။
ပုဂံပွညျကွီးမှာ မုဆိုးမပငျ ဘုရားတညျနိုငျတဲ့အထိ ခမျြးသာစခေဲ့တဲ့ ရှငျအဇ်ဇဂေါဏရဲ့ ဒဏ်ဍာရီ
ပုဂံပွညျကွီးမှာ မုဆိုးမပငျ ဘုရားတညျနိုငျတဲ့အထိ ခမျြးသာစခေဲ့တဲ့ ရှငျအဇ်ဇဂေါဏရဲ့ ဒဏ်ဍာရီ ပုဂံသမိုငျးကို ပွောရမညျဆိုလြှငျ ရှငျအဇ်ဇဂေါဏသညျ မပါမပွီးခြေ။ရှငျအဇ်ဇဂေါဏ ချေါရှငျမထီးဆိုသညျမှာ ထရေဝါဒမထှနျးကားမှီ ပုဂံပွညျသဉျေလညျကွောငျမငျးတရားကွီးလကျထကျတှငျလောကီရေးရာ အဂ်ဂိရတျဖိုထိုးခွငျးမှ ဓါတျလုံးအောငျပွီး ပုဂံပွညျတှငျ မုဆိုးမပငျ ဘုရားတညျနိုငျသညျဟုပွောစမှတျတှငျခဲ့သူ ဖွဈသညျ။ပုံပွငျဒဏ်ဍာရီယုံကွညျသူတို့အဖို့ ပုဂံပွညျသညျဤမြှနယျနမိတျအတှငျးတှငျ ဘုရားပေါငျးမွောကျမြားစှာ တညျရှိကွခွငျးသညျရှငျအဇ်ဇဂေါဏကွောငျ့ ဖွဈသညျဟု ယုံကွညျကွသညျမှာလညျး မထူးဆနျးပါ။
ရှငျအဇ်ဇဂေါဏ ဒဏ်ဍာရီကိုပွောရမညျဆိုလြှငျ ခရဈနှဈ (344 ခုမှ 387)ခုနှဈအထိ နနျးစံခဲ့သော သဉျေလညျကွောငျမငျးတရားကွီး လကျထကျခနျ့ကဖွဈခဲ့သညျ။ရှငျအဇ်ဇဂေါဏ သညျ ရှဖွေဈလမျး၊ ငှဖွေဈလမျးလိုကျနသေောအဂ်ဂိရတျထိုးခွငျး အောငျမွငျပါက ပုဂံတဈပွညျလုံးခမျြးသာလိမျ့မညျ ဓါတျလုံးမပေါကျခဲ့ပါက မိမိ၏ မကျြလုံးနှဈလုံးကို ထိုးဖောကျပဈရနျ အာမခံခဲ့သညျ။သဉျေလညျကွောငျ မငျးကွီးက ယုံကွညျသောကွောငျ့ ဓါတျလုံးထိုးရနျဘုရငျ့ဘဏ်ဍာတိုကျမှ ရှမြေားထုတျယူကာ ဓါတျလုံးရှကြှေေးသညျ။ ဘုရငျသညျစိတျရှညျသညျးခံကာ ဘဏ်ဍာတိုကျမှ ရှတေဈဝကျခနျ့ ကိုထုတျပေးခဲ့သညျ။
ဓါတျလုံးမပေါကျခဲ့ဘဲ ဆကျလကျထိုးရငျး ဘဏ်ဍာတျော ၃ ပုံ ၁ ပုံသာကနျြတော့သညျ။ နောကျဆုံး ဘုရငျ အတျောပငျ စိတျပကျြသှားကာဘဏ်ဍာတိုကျရှိ ရှမြေားလညျး အကုနျကုနျပွီးသှား လတေော့သညျ။ရှငျအဇ်ဇဂေါဏ၏ တပညျ့မြားဖွဈသော ကြျောစှာနှငျ့သျောတာလငျမယားတို့ဖိုကို မပွတျတဈလှညျ့ စီဆှဲပေးကွရငျး တဈညတှငျ အဂ်ဂိရတျဖို အတှငျးမှရဲရဲနီနသေော ဓါတျလုံးသညျ ရှရေောငျပွောငျးလာကာ လငျးလကျနလေတေော့သညျ။ထိုဓါတျလုံးအောငျသှားသညျကို ကွားလိုကျသောဘုရငျသညျရှငျအဇ်ဇဂေါဏ ကြောငျးသို့လိုကျလာခဲ့ပွီး ကိစ်စပွီးမွောကျသှားပွီလား ဆိုသညျကို မေးမွနျးလရော ရှငျအဇ်ဇဂေါဏ ကဓါတျလုံးရှဖွေဈပါပွီ၊
ဓါတျလုံးပှငျ့ရနျဆေးရညျ စိမျရမညျဟု ပွနျလညျမိနျ့ကွားသညျ။ထို့ကွောငျ့ဘုရငျကလညျးဆေးရညျစိမျရနျ စောငျ့ကွညျ့နလေေ သညျ။ပထေုတျကိုယူကာ ဓါတျဆေးရညျအတှကျ ခဉျြရညျစိမျရမညျ ဖွဈသဖွငျ့တပညျ့လငျမယားအား ရှောကျသီးယူ စကော အရညျညှဈ ပွီး ရှောကျရညျထညျ့ထားသော ခှကျအတှငျး ထညျ့လိုကျသညျ။ထိုအခါဓါတျလုံးသညျ အရောငျမှိနျသှားသဖွငျ့ ရှငျအဇ်ဇဂေါဏက ဓါတျလုံးပကျြသှားကွောငျးသိလိုကျရသညျ။ဘုရငျလညျး ရှငျအဇ်ဇဂေါဏ ပွောထားသော စကားအတိုငျး ဘုရငျလညျးသူ၏မကျြလုံးကိုဖောကျထုတျပဈလိုကျလသေညျ။ကြျောစှာတို့လငျမယားကြောငျးမှ ဆငျးပွေးသညျကို ဘုရငျက လိုကျလံသုတျသငျရငျး အသကျဆုံးရှုံးခဲ့ရသညျ။ ရှငျအဇ်ဇဂေါဏ လညျး စိတျဓါတျကသြှားပွီး ထိုဓါတျလုံးအား ကြောငျးကုဋီတှငျ ကိုရငျငယျ အား ပဈခခြိုငျးလသေညျ။
ထိုအခါ ကုဋီမီးလောငျသညျဟုကိုရငျငယျက လြှောကျထားရာ ရှငျအဇ်ဇဂေါဏက ဓါတျလုံးပေါကျသှားမှနျးသိသဖွငျ့ ပွနျလညျဆညျယူစခေဲ့သညျ။စငျစဈ ခဉျြရနှေငျ့ ခြီးရေ လှဲသှားခွငျးဖွဈသောကွောငျ့ ခဉျြရနှေငျ့စိမျသျောလညျး မအောငျမွငျ ရခွငျးဖွဈလသေညျ။ကပ်ပိယအား ဈေးသို့ရရာ မကျြလုံးဝယျရနျ စခေိုငျးလိုကျသဖွငျ့ ဈေးကှဲနပွေီဖွဈရာ ဆိတျမကျြလုံးတဈလုံးနှငျ့နှားမကျြလုံး တဈလုံးသာ ရရှိခဲ့သညျ။ ထိုမကျြလုံးတို့အား ရှငျအဇ်ဇဂေါဏကသူ၏မကျြလုံးအိမျ အတှငျးသို့ ပွနျထညျ့လိုကျသညျ။ပါဠိဘာသာအရ အဇ်ဇသညျဆိတျဖွဈကာ ဂေါဏသညျ နှား ဖွဈသညျကို အကွောငျးပွုကာ ရှငျမထီးအား ရှငျအဇ်ဇဂေါဏ ဟုချေါတှငျခဲ့သညျ။
ထိုအခြိနျမှစပွီး ပုဂံပွညျ တဈပွညျလုံးမုဆိုးမပငျ ဘုရားတညျနိုငျသညျအထိ ခမျြးသာ ကုနျကွလသေညျ။သို့သျော ရှငျအဇ်ဇဂေါဏ၏ရာဇဝငျနှငျ့ပတျသကျသော တိကြ ခိုငျမာသောအထောကျ အထား၊ ကြောကျစာကိုမူတဈခုမြှ မတှရေ့သဖွငျ့ ဒဏ်ဍာရီဆနျနသေညျ။ဤ ဘုရားကို ရှေးဟောငျးသုတသေနဌာနက ဘုရားအမှတျ( ၅၀၉ က)ဟု မှတျပုံတငျထားသညျ။ ဘုရားမွောကျဖကျတှငျ ရှငျအဇ်ဇဂေါဏ ဓါတျခနျးဖှငျ့ထားသော အုတျတိုကျတဈခုရှိကာ ရုပျပှားတျော ၊ရှငျအဇ်ဇဂေါဏ ရက်ကနျးစငျတောငျဆရာတျောရုပျထုနှငျ့ ဘိုးဘိုးအောငျ၊ ဘိုးမငျးခေါငျ ရုပျတုမြားကိုထားရှိကာ အဓိဌာနျဝငျလိုသူမြား လာရောကျကနျတော့ကွသညျကို တှရေ့သညျ။ ဓါတျခနျး၏မူလ အလှူရှငျကိုမူ မသိရခြေ။
ဤ ဘုရားဘှဲ့တျော ပေးဖွဈခဲ့ပုံမှာ ဘုရားဝငျးအတှငျး အဂ်ဂိရတျဖိုထိုးရာတှငျ အသုံးပွုခဲ့သော လုံကှဲမြား၊မီးသှေးခဲနှငျ့ ပွာမြားတှရှေိ့ခဲ့သဖွငျ့ ရှငျအဇ်ဇဂေါဏဘုရားဟု နာမညျ ပေးခွငျးသာ ဖွဈလသေညျ။ဘုရား၏ရာဇဝငျကို အတိအကြ မသိနိုငျသျောလညျး ဘုရား၏ တညျဆောကျထားပုံအပွငျပနျးကို လလေ့ာနိုငျသညျ။ ရှငျအဇ်ဇဂေါဏ ဘုရားသညျ ခုံအမွငျ့ပျေါတှငျ တငျကာ ဆောကျလုပျထားသညျအလညျမဏ်ဍိုငျ(Centre Core )ကိုမထညျ့သှငျးဘဲ အုတျနံရံ ၄ ဘကျမှ တကျလာသောခုံးမိုး( ၄ ) ခုပေါငျးဆုံကာ စုထိုးပေါငျးမိုး ( Cross Vault )အဖွဈအထကျသို့ကှမျးတောငျတကျထားသော သာမာနျပုဂံဘုရား တို့နှငျ့ မတူသညျ့ ဘုရားဖွဈသညျ။
တိုငျမပါသော ဤတညျဆောကျပုံမြိုးသညျ ခုံးမိုးမြားကို ပိုငျနိုငျကြှမျးကငျြစှာ အသုံးခနြိုငျသော ပုဂံခတျေ၏ ဆောကျလုပျရေး နညျးပညာကိုပွသနသေော ဗိသုကာဖွဈပွီး ရှားပါးဘုရားတဈဆူ လညျးဖွဈသညျ။အပွငျဖကျပိုငျးတှငျ အင်ျဂတေ အမှနျးပနျး တို့သညျ အတျောပငျ ကောငျးမှနျနသေေးသညျ။ အတှငျးနံရံမြားတှငျ သမ်ဗုဒ်ဓေ ဘုရားမြားစှာကို ပနျးခြီရေးဆှဲထားသညျ။ဤဘုရားကို ( ၁၂ ) ရာစုနှောငျးခနျ့က တညျဆောကျခဲ့သောဘုရားဟု ပညာရှငျတို့ ယူဆသညျ။ထို့ကွောငျ့ ဒဏ်ဍာရီနှငျ့ ဆကျစပျကာ ဗိသုကာဆနျးကွယျသော ရှငျအဇ်ဇဂေါဏဘုရားအား ပုဂံသို့ ရောကျလြှငျ သှားရောကျ လညျပတျသငျ့ပါကွောငျးရေးသား တငျဆကျလိုကျပါသညျ
ပုဂံပြည်ကြီးမှာ မုဆိုးမပင် ဘုရားတည်နိုင်တဲ့အထိ ချမ်းသာစေခဲ့တဲ့ ရှင်အဇ္ဇဂေါဏရဲ့ ဒဏ္ဍာရီ ပုဂံသမိုင်းကို ပြောရမည်ဆိုလျှင် ရှင်အဇ္ဇဂေါဏသည် မပါမပြီးချေ။ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ ခေါ်ရှင်မထီးဆိုသည်မှာ ထေရဝါဒမထွန်းကားမှီ ပုဂံပြည်သေဉ်လည်ကြောင်မင်းတရားကြီးလက်ထက်တွင်လောကီရေးရာ အဂ္ဂိရတ်ဖိုထိုးခြင်းမှ ဓါတ်လုံးအောင်ပြီး ပုဂံပြည်တွင် မုဆိုးမပင် ဘုရားတည်နိုင်သည်ဟုပြောစမှတ်တွင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ပုံပြင်ဒဏ္ဍာရီယုံကြည်သူတို့အဖို့ ပုဂံပြည်သည်ဤမျှနယ်နမိတ်အတွင်းတွင် ဘုရားပေါင်းမြောက်များစွာ တည်ရှိကြခြင်းသည်ရှင်အဇ္ဇဂေါဏကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်မှာလည်း မထူးဆန်းပါ။
ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ ဒဏ္ဍာရီကိုပြောရမည်ဆိုလျှင် ခရစ်နှစ် (344 ခုမှ 387)ခုနှစ်အထိ နန်းစံခဲ့သော သေဉ်လည်ကြောင်မင်းတရားကြီး လက်ထက်ခန့်ကဖြစ်ခဲ့သည်။ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ သည် ရွှေဖြစ်လမ်း၊ ငွေဖြစ်လမ်းလိုက်နေသောအဂ္ဂိရတ်ထိုးခြင်း အောင်မြင်ပါက ပုဂံတစ်ပြည်လုံးချမ်းသာလိမ့်မည် ဓါတ်လုံးမပေါက်ခဲ့ပါက မိမိ၏ မျက်လုံးနှစ်လုံးကို ထိုးဖောက်ပစ်ရန် အာမခံခဲ့သည်။သေဉ်လည်ကြောင် မင်းကြီးက ယုံကြည်သောကြောင့် ဓါတ်လုံးထိုးရန်ဘုရင့်ဘဏ္ဍာတိုက်မှ ရွှေများထုတ်ယူကာ ဓါတ်လုံးရွှေကျွေးသည်။ ဘုရင်သည်စိတ်ရှည်သည်းခံကာ ဘဏ္ဍာတိုက်မှ ရွှေတစ်ဝက်ခန့် ကိုထုတ်ပေးခဲ့သည်။
ဓါတ်လုံးမပေါက်ခဲ့ဘဲ ဆက်လက်ထိုးရင်း ဘဏ္ဍာတော် ၃ ပုံ ၁ ပုံသာကျန်တော့သည်။ နောက်ဆုံး ဘုရင် အတော်ပင် စိတ်ပျက်သွားကာဘဏ္ဍာတိုက်ရှိ ရွှေများလည်း အကုန်ကုန်ပြီးသွား လေတော့သည်။ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ၏ တပည့်များဖြစ်သော ကျော်စွာနှင့်သော်တာလင်မယားတို့ဖိုကို မပြတ်တစ်လှည့် စီဆွဲပေးကြရင်း တစ်ညတွင် အဂ္ဂိရတ်ဖို အတွင်းမှရဲရဲနီနေသော ဓါတ်လုံးသည် ရွှေရောင်ပြောင်းလာကာ လင်းလက်နေလေတော့သည်။ထိုဓါတ်လုံးအောင်သွားသည်ကို ကြားလိုက်သောဘုရင်သည်ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ ကျောင်းသို့လိုက်လာခဲ့ပြီး ကိစ္စပြီးမြောက်သွားပြီလား ဆိုသည်ကို မေးမြန်းလေရာ ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ ကဓါတ်လုံးရွှေဖြစ်ပါပြီ၊
ဓါတ်လုံးပွင့်ရန်ဆေးရည် စိမ်ရမည်ဟု ပြန်လည်မိန့်ကြားသည်။ထို့ကြောင့်ဘုရင်ကလည်းဆေးရည်စိမ်ရန် စောင့်ကြည့်နေလေ သည်။ပေထုတ်ကိုယူကာ ဓါတ်ဆေးရည်အတွက် ချဉ်ရည်စိမ်ရမည် ဖြစ်သဖြင့်တပည့်လင်မယားအား ရှောက်သီးယူ စေကာ အရည်ညှစ် ပြီး ရှောက်ရည်ထည့်ထားသော ခွက်အတွင်း ထည့်လိုက်သည်။ထိုအခါဓါတ်လုံးသည် အရောင်မှိန်သွားသဖြင့် ရှင်အဇ္ဇဂေါဏက ဓါတ်လုံးပျက်သွားကြောင်းသိလိုက်ရသည်။ဘုရင်လည်း ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ ပြောထားသော စကားအတိုင်း ဘုရင်လည်းသူ၏မျက်လုံးကိုဖောက်ထုတ်ပစ်လိုက်လေသည်။ကျော်စွာတို့လင်မယားကျောင်းမှ ဆင်းပြေးသည်ကို ဘုရင်က လိုက်လံသုတ်သင်ရင်း အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ လည်း စိတ်ဓါတ်ကျသွားပြီး ထိုဓါတ်လုံးအား ကျောင်းကုဋီတွင် ကိုရင်ငယ် အား ပစ်ချခိုင်းလေသည်။
ထိုအခါ ကုဋီမီးလောင်သည်ဟုကိုရင်ငယ်က လျှောက်ထားရာ ရှင်အဇ္ဇဂေါဏက ဓါတ်လုံးပေါက်သွားမှန်းသိသဖြင့် ပြန်လည်ဆည်ယူစေခဲ့သည်။စင်စစ် ချဉ်ရေနှင့် ချီးရေ လွဲသွားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ချဉ်ရေနှင့်စိမ်သော်လည်း မအောင်မြင် ရခြင်းဖြစ်လေသည်။ကပ္ပိယအား ဈေးသို့ရရာ မျက်လုံးဝယ်ရန် စေခိုင်းလိုက်သဖြင့် ဈေးကွဲနေပြီဖြစ်ရာ ဆိတ်မျက်လုံးတစ်လုံးနှင့်နွားမျက်လုံး တစ်လုံးသာ ရရှိခဲ့သည်။ ထိုမျက်လုံးတို့အား ရှင်အဇ္ဇဂေါဏကသူ၏မျက်လုံးအိမ် အတွင်းသို့ ပြန်ထည့်လိုက်သည်။ပါဠိဘာသာအရ အဇ္ဇသည်ဆိတ်ဖြစ်ကာ ဂေါဏသည် နွား ဖြစ်သည်ကို အကြောင်းပြုကာ ရှင်မထီးအား ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
ထိုအချိန်မှစပြီး ပုဂံပြည် တစ်ပြည်လုံးမုဆိုးမပင် ဘုရားတည်နိုင်သည်အထိ ချမ်းသာ ကုန်ကြလေသည်။သို့သော် ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ၏ရာဇဝင်နှင့်ပတ်သက်သော တိကျ ခိုင်မာသောအထောက် အထား၊ ကျောက်စာကိုမူတစ်ခုမျှ မတွေ့ရသဖြင့် ဒဏ္ဍာရီဆန်နေသည်။ဤ ဘုရားကို ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနက ဘုရားအမှတ်( ၅၀၉ က)ဟု မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ ဘုရားမြောက်ဖက်တွင် ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ ဓါတ်ခန်းဖွင့်ထားသော အုတ်တိုက်တစ်ခုရှိကာ ရုပ်ပွားတော် ၊ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ ရက္ကန်းစင်တောင်ဆရာတော်ရုပ်ထုနှင့် ဘိုးဘိုးအောင်၊ ဘိုးမင်းခေါင် ရုပ်တုများကိုထားရှိကာ အဓိဌာန်ဝင်လိုသူများ လာရောက်ကန်တော့ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဓါတ်ခန်း၏မူလ အလှူရှင်ကိုမူ မသိရချေ။
ဤ ဘုရားဘွဲ့တော် ပေးဖြစ်ခဲ့ပုံမှာ ဘုရားဝင်းအတွင်း အဂ္ဂိရတ်ဖိုထိုးရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သော လုံကွဲများ၊မီးသွေးခဲနှင့် ပြာများတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် ရှင်အဇ္ဇဂေါဏဘုရားဟု နာမည် ပေးခြင်းသာ ဖြစ်လေသည်။ဘုရား၏ရာဇဝင်ကို အတိအကျ မသိနိုင်သော်လည်း ဘုရား၏ တည်ဆောက်ထားပုံအပြင်ပန်းကို လေ့လာနိုင်သည်။ ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ ဘုရားသည် ခုံအမြင့်ပေါ်တွင် တင်ကာ ဆောက်လုပ်ထားသည်အလည်မဏ္ဍိုင်(Centre Core )ကိုမထည့်သွင်းဘဲ အုတ်နံရံ ၄ ဘက်မှ တက်လာသောခုံးမိုး( ၄ ) ခုပေါင်းဆုံကာ စုထိုးပေါင်းမိုး ( Cross Vault )အဖြစ်အထက်သို့ကွမ်းတောင်တက်ထားသော သာမာန်ပုဂံဘုရား တို့နှင့် မတူသည့် ဘုရားဖြစ်သည်။
တိုင်မပါသော ဤတည်ဆောက်ပုံမျိုးသည် ခုံးမိုးများကို ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးချနိုင်သော ပုဂံခေတ်၏ ဆောက်လုပ်ရေး နည်းပညာကိုပြသနေသော ဗိသုကာဖြစ်ပြီး ရှားပါးဘုရားတစ်ဆူ လည်းဖြစ်သည်။အပြင်ဖက်ပိုင်းတွင် အင်္ဂတေ အမွန်းပန်း တို့သည် အတော်ပင် ကောင်းမွန်နေသေးသည်။ အတွင်းနံရံများတွင် သမ္ဗုဒ္ဓေ ဘုရားများစွာကို ပန်းချီရေးဆွဲထားသည်။ဤဘုရားကို ( ၁၂ ) ရာစုနှောင်းခန့်က တည်ဆောက်ခဲ့သောဘုရားဟု ပညာရှင်တို့ ယူဆသည်။ထို့ကြောင့် ဒဏ္ဍာရီနှင့် ဆက်စပ်ကာ ဗိသုကာဆန်းကြယ်သော ရှင်အဇ္ဇဂေါဏဘုရားအား ပုဂံသို့ ရောက်လျှင် သွားရောက် လည်ပတ်သင့်ပါကြောင်းရေးသား တင်ဆက်လိုက်ပါသည်
မန်တလေးမှာ ၅၀၀ကပျြတနျ တနျဖိုးနညျး ထမငျးဆိုငျ နှဈဆိုငျဖှငျ့တာမှာ တနာရီအတှငျးကုနျ
အခွခေံလူတနျးစားတှအေတှကျ စားဝတျနရေေးပွလေညျအောငျရညျရှယျပွီး မန်တလေးမွို့မှာ ၅၀၀ကပျြတနျ တနျဖိုးနညျးထမငျးဆိုငျ ဒီကနမှေ့ာတငျ နှဈဆိုငျဖှငျ့လှဈခဲ့တာမှာ အားပေးသူမြားလို့ တနာရီအတှငျး ကုနျသှားခဲ့ပါတယျ။
မဟာအောငျမွမွေို့နယျ ၃၇Aလမျး ၆၀၊၆၁လမျးကွား ပွညျကွီးမကျြရှငျကားကွီးကှငျးတောငျဘကျမှာရှိတဲ့ ရှဘေုနျးလူငယျပရဟိတအသငျးသားတှေ စုပေါငျးပွီး တနျးဘိုးနညျး ထမငျးဆိုငျဖှငျ့လှဈခဲ့သလို လမျး၃၀နဲ့ ၉၀လမျးထောငျ့က မိဘမတ်ေတာ မာလာဟငျးဆိုငျကလညျး ၅၀၀ကပျြတနျ တနျဖိုးနညျးထမငျးဆိုငျကို ဖှငျ့လှဈခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ရှဘေုနျးလူငယျပရဟိတအသငျးက မပှငျ့မွတျဗိုလျကတော့”အခွခေံလူတနျးစားတှကေ အခုခြိနျမှာ အလုပျလကျမဲ့တှဖွေဈနတေဲ့အတှကျ စားဝတျနရေေးခကျခဲတာကွောငျ့ ၅၀၀ဆိုတဲ့ အတိုငျးအတာတဈခုဆိုတော့ လူတိုငျးစားသောကျနိုငျတဲ့ အခွအေနရှေိတဲ့အတှကျကွောငျ့ ၅၀၀ တနျထမငျးဆိုငျလေးကို ဖှငျ့ဖွဈတာဖွဈပါတယျ ဒီနအေ့တှကျကို ပထမဦးဆုံး အစမျးဖွဈလို့ လူ၃၀၀ စာစီစဉျထားပမေယျ့ တဈနာရီအတှငျးမှာကုနျသှားတာပါ။ နောကျရကျတှကေို ထပျတိုးဖို့ အစီအစဉျရှိသေးတယျ” လို့ပွောပါတယျ။
“ကနြျောတို့က ဒီဟာကိုလုပျပွီဆိုကတညျးက အရှုံးရှိမယျဆိုတာ သခြောပေါကျတှကျထားပါတယျ။ကနြျောတို့က လူမှုကူညီရေးအသငျးဖွဈတဲ့အတှကျ သူတို့ကိုအဆငျပွခေငျြတာဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ အရှုံးကိုဆကျလကျပွီးတော့ ရငျဆိုငျမှာပါ”လို့ မပှငျ့မွတျဗိုလျက ပွောပါတယျ။
အသငျးကလူငယျတှေ ပိုကျဆံစုပွီး ကိုယျထူကိုယျထလုပျတာဖွဈတဲ့အတှကျ တဈပတျကို တနင်ျလာ၊အင်ျဂါ၊ ဗုဒ်ဓဟူးနတှေ့မှောပဲ ရောငျးခပြေးမှာဖွဈပွီး အလှူရှငျတှရှေိလာရငျတော့ တဈပတျကို ၅ရကျနဲ့ နတေို့ငျးရောငျးခပြေးသှားဖို့ရှိတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။
မိဘမတ်ေတာ တနျဖိုးနညျးထမငျးဆိုငျက မနိုဝငျဘာငွိမျးကလညျး ” တနျဖိုးနညျးထမငျးဆိုငျဒီကနစေ့ဖှငျ့ဖွဈတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဆိုတျောမောငျလေးက သူ့စတေနာနဲ့ လှူခငျြတယျဆိုလို့ ဒီနကေ့တော့ ရောငျခတြာမဟုတျပါဘူး။ လာတဲ့သူတှအေားလုံးကို အခမဲ့လေးဝပေေးပါဆိုလို့ အမတို့က ဝပေေးတာပါ။ စီစဉျထားတာတော့ လူ၃၀၀စာလောကျဆိုပမေယျ့ ဒီမှာလာတာတာကတော့ လူ၄၀၀လောကျရှိမယျ” လို့ပွောပါတယျ။
မိဘမတ်ေတာထမငျးဆိုငျကတော့ ဒီကနမှေ့ာ မနကျ၁၁နာရီကနေ ဖှငျ့လှဈခဲ့တာဖွဈပမေယျ့ မနကျဖွနျကစလို့ ညနေ၎နာရီမှာ စတငျဖှငျ့လှဈရောငျးခပြေးသှားမှာဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက် စားဝတ်နေရေးပြေလည်အောင်ရည်ရွယ်ပြီး မန္တလေးမြို့မှာ ၅၀၀ကျပ်တန် တန်ဖိုးနည်းထမင်းဆိုင် ဒီကနေ့မှာတင် နှစ်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာမှာ အားပေးသူများလို့ တနာရီအတွင်း ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်။
မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၃၇Aလမ်း ၆၀၊၆၁လမ်းကြား ပြည်ကြီးမျက်ရှင်ကားကြီးကွင်းတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ ရွှေဘုန်းလူငယ်ပရဟိတအသင်းသားတွေ စုပေါင်းပြီး တန်းဘိုးနည်း ထမင်းဆိုင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သလို လမ်း၃၀နဲ့ ၉၀လမ်းထောင့်က မိဘမေတ္တာ မာလာဟင်းဆိုင်ကလည်း ၅၀၀ကျပ်တန် တန်ဖိုးနည်းထမင်းဆိုင်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေဘုန်းလူငယ်ပရဟိတအသင်းက မပွင့်မြတ်ဗိုလ်ကတော့”အခြေခံလူတန်းစားတွေက အခုချိန်မှာ အလုပ်လက်မဲ့တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲတာကြောင့် ၅၀၀ဆိုတဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခုဆိုတော့ လူတိုင်းစားသောက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ၅၀၀ တန်ထမင်းဆိုင်လေးကို ဖွင့်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့အတွက်ကို ပထမဦးဆုံး အစမ်းဖြစ်လို့ လူ၃၀၀ စာစီစဉ်ထားပေမယ့် တစ်နာရီအတွင်းမှာကုန်သွားတာပါ။ နောက်ရက်တွေကို ထပ်တိုးဖို့ အစီအစဉ်ရှိသေးတယ်” လို့ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့က ဒီဟာကိုလုပ်ပြီဆိုကတည်းက အရှုံးရှိမယ်ဆိုတာ သေချာပေါက်တွက်ထားပါတယ်။ကျနော်တို့က လူမှုကူညီရေးအသင်းဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ကိုအဆင်ပြေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အရှုံးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ ရင်ဆိုင်မှာပါ”လို့ မပွင့်မြတ်ဗိုလ်က ပြောပါတယ်။
အသင်းကလူငယ်တွေ ပိုက်ဆံစုပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ပတ်ကို တနင်္လာ၊အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွေမှာပဲ ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပြီး အလှူရှင်တွေရှိလာရင်တော့ တစ်ပတ်ကို ၅ရက်နဲ့ နေ့တိုင်းရောင်းချပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
မိဘမေတ္တာ တန်ဖိုးနည်းထမင်းဆိုင်က မနိုဝင်ဘာငြိမ်းကလည်း ” တန်ဖိုးနည်းထမင်းဆိုင်ဒီကနေ့စဖွင့်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုတော်မောင်လေးက သူ့စေတနာနဲ့ လှူချင်တယ်ဆိုလို့ ဒီနေ့ကတော့ ရောင်ချတာမဟုတ်ပါဘူး။ လာတဲ့သူတွေအားလုံးကို အခမဲ့လေးဝေပေးပါဆိုလို့ အမတို့က ဝေပေးတာပါ။ စီစဉ်ထားတာတော့ လူ၃၀၀စာလောက်ဆိုပေမယ့် ဒီမှာလာတာတာကတော့ လူ၄၀၀လောက်ရှိမယ်” လို့ပြောပါတယ်။
မိဘမေတ္တာထမင်းဆိုင်ကတော့ ဒီကနေ့မှာ မနက်၁၁နာရီကနေ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် မနက်ဖြန်ကစလို့ ညနေ၄နာရီမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“အမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း ချို့တဲ့ပြည်သူတစ်ယောက်ဘဲလေ အမအရင်က ဒီမှာ မာလာဟင်းနဲ့ အကင်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတယ် ရောင်းရတာအဆင်မပြေဘူး အကုန်လုံးခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေ ဒီလိုဆိုင်လေးဖွင့်လိုက်ရင် ကိုယ့်အတွက်လည်း ကုသိုလ်ရမယ်၊ အကုန်လုံးလည်းအဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးတော့ ချက်ခြင်းအကောင်အထည်ဖော်လိုက်တာပါ”လို့ မနိုဝင်ဘာငြိမ်းက ပြောပါတယ်။
မိဘမေတ္တာထမင်းဆိုင်ရှင် မနိုဝင်ဘာငြိမ်းကတော့ သူ့ရဲ့ကိုသိုလ်ပြုတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ အလှူရှင်တွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီး လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့အချိန်အထိ ရင်ဆိုင်ပြီး ရပ်တည်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
” ဆံပငျက ခေါငျးပျေါမှာ ရှိနရေငျ ကွညျ့ကောငျးတယျ။ ခေါငျးပျေါမှာ မဟုတျဘဲ ကြှတျသှားရငျ ရှံစရာဖွဈသှားတယျ။ မွတျနိုးစရာကောငျးတာနဲ့ ရှံစရာကောငျးတာရဲ့ကွားထဲက ခွားနားခကျြကို စိတျဝငျစားတယျ” လို့ ဖနျတီးသူ Passi က ပွောပါတယျ။
” ဆံပင်က ခေါင်းပေါ်မှာ ရှိနေရင် ကြည့်ကောင်းတယ်။ ခေါင်းပေါ်မှာ မဟုတ်ဘဲ ကျွတ်သွားရင် ရွံစရာဖြစ်သွားတယ်။ မြတ်နိုးစရာကောင်းတာနဲ့ ရွံစရာကောင်းတာရဲ့ကြားထဲက ခြားနားချက်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်” လို့ ဖန်တီးသူ Passi က ပြောပါတယ်။